Ukuhlukaniswa kanye nokungeniswa kweziqukathi ezijwayelekile zokulungisa izinto (ezimbili) - Usizo lwabenza imisenenzi Ukwakha Metal Isitoreji Izinsiza kusebenza Metal Isitsha,Inqola,Pallet,Rack,Roll Isitsha Etc
Ikhaya » Ukuhlukaniswa kanye nokungeniswa kweziqukathi ezijwayelekile zokulungisa izinto (ezimbili)
1. Isitoreji sokugcina
Isitoreji sokugcina, eyaziwa nangokuthi yi-mesh cage yensimbi, yamukela izitayela ezidumile zomhlaba wonke. Ivolumu ngemuva kokugoqwa kuphela 1/3 wevolumu lapho behlangene. Inezinzuzo zesisindo sokukhanya, indawo encane yaphansi kanye nenhlanganisela elula. Isetshenziswa kabanzi ezikhungweni zokuhanjiswa kwe-loop evaliwe njengokusatshalaliswa kwezingxenye, imishini emincane, ukucubungula kobumba, imikhiqizo kagesi, Logistics ukulethwa kwezidingo, kanye nezikhungo ezinkulu zokuhambisa. Kungumkhiqizo omusha ohlanganisa amabhizinisi anamuhla nezidingo zokuvikela imvelo kanye nohlelo lwe-zero yokusungula. Amakheji wokugcina wokugcina ngokuvamile asetshenziselwa ukugcina noma ukudlulisa izingxenye zomkhiqizo, njll. Idizayini ethandekayo inikeza ukufinyelela okulula nganoma yisiphi isikhathi futhi igcina izindleko eziningi zokuthenga.
2. Ibhokisi le-Metal turnover
Amabhokisi e-Metal turnover abizwa nangokuthi ngamabhokisi okufika kwezinto, amabhokisi wezinto noma amabhokisi okuphuma. Amabhokisi we-Metal Turnover asetshenziswa kabanzi kwezokuhamba, ukusatshalaliswa, isitoreji, ukusatshalaliswa kanye nokusebenza kwezimboni ezimbonini ezifana nemishini, izimoto, izinto zasekhaya, ihadiwe, nogesi. Ingasetshenziswa nezinhlobonhlobo zeziqukathi zezinto zokusebenza kanye nezindawo zokusebenzela zempahla ehlukahlukene, ukukhiqiza, esizeni nakwamanye amathuba.
3. Logistics Inqola
I-Logistics trolley ibizwa nangokuthi i-cargo trolley, trolley ejikelezayo noma ikolishi trolley. Kuyithuluzi lezinto ezisebenzisa umahamba nendlwana elihlome ngezinto ezine zokuhambisa nokuhambisa izinto zokugcina. I-trolley ye-Logistics isitsha esijwayelekile esifanele ukusatshalaliswa komkhiqizo kanye nokugcinwa kwesikhashana ezindaweni zokusebenzela, izindawo zokugcina izimpahla, kanye nezitolo. I-trolley ye-Logistics ilungele ukuthutha, futhi izinto zibukeka ngamehlo futhi zingakwazi ukugoqwa ukuze zithuthwe, ukuphatha, ukulayisha nokulayisha, njll. I-trolley ye-logistics ingahlukaniswa ngohlobo olujwayelekile (Uhlobo L), Uhlobo lwe-U nohlobo olukhethekile ngokuya ngesakhiwo ukuhlangabezana nezidingo zokusebenzisa ezahlukahlukene.
Isikhathi sokuthumela: 2020-06-24
Foshan Yougu Isitoreji Izinsiza kusebenza Co., Ltd © 2020 WONKE AMALUNGELO AGODLIWE imigomo yokusetshenziswa kanye nenqubomgomo yemfihlo